एमाले र कांग्रेसका ८ जना चर्चित नेता पक्राउ, को को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
एमाले र कांग्रेसका ८ जना चर्चित नेता पक्राउ, को को हुन् उनि ?
काठमाडौ। तुलसीपुरबाट शुक्रबार दिउँसै नेकपा एमाले र कांग्रेसका नेतासहित ८ जना जुवाडेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एमालेका नेता मानबहादुर रावत पक्राउ परेका हुन्। तुलसीपुर ११ उरहरीका रावत एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य र दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का इञ्चार्ज हुन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ रजौरास्थित बासु आचार्यको खाली टहराको घरमा शुक्रबार अपरान्ह ४ बजेतिर कौडा खेलिरहेको अवस्थामा छापा हान्दा रावतसहित ८ जनाको साथबाट करिब दुई लाख नगद र केही कागजात पनि बरामद भएको दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेल बताए।
पक्राउ पर्ने अन्यमा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपु गिरी, सुरेन्द्र हमाललगायत छन्ए। सपी काफ्लेले भने, पक्राउ परेकामध्ये केही यसअघि पनि पटक÷पटक जुवाको खालबाट पक्राउ परी कारबाही भोगिसकेका व्यक्ति रहेको भन्ने खुलेको छ।
पक्राउ परेकालाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको थुनुवा कक्षमा राखिएको छ। एमाले र कांग्रेसका नेताहरू नै जुवाको खालबाट पक्राउ परेपछि छोडिदिन भनेर तारन्तर नेताहरूले समेत फोन गरेर दबाब दिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए।
तारन्तार नेताका फोनहरू आएका छन्, एक प्रहरी अधिकारीले भने, उनीहरूले छोड्न दबाब दिँदै नभए तत्काल सरूवा गरिदिने धम्की पनि दिन थालेका छन्। कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न,
हुनेहरूलाई छोडिदिन भनेर दबाब दिनु र प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नदिएर बाधा उत्पन्न गर्नु गलत भएको ती प्रहरी अधिकारीले बताए। एसपी काफ्लेले भने आफूले कानुन कार्यान्वयनको सवालमा नियम अनुसार चल्ने बताए।
यसैगरि, जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके राउत झनै उग्र बनेका छन्। उनले आन्दोलनका क्रममा गोली चले पनि पछि नहट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन्।
भ्रष्टाचार र बेतिथिविरुद्ध जनआन्दोलनको तयारी स्वरुप घोषणा गरेको ९ दिने आन्दोलनको पाँचौ दिन आज डा। राउतले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा रहेको सचिवालय पेजमार्फत निर्देशन दिँदै भनेका छन्।
कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने, चाहे लाठी चार्ज होस् वा गाली चलोस्। उनले प्रहरी, प्रशासन, अन्य पार्टी तथा घुसपैठियाहरुले आक्रमण गर्छन्। नै भनेर मानसिक रुपले तयार रहन पनि कार्यकर्तालाई भनेका छन्।
भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जनकपुरस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल निकास आयोजना कार्यालय प्रमुख राजेश्वर कुशवाहालाई कात्तिक ४ मा अर्धनग्न बजार घुमाएर राउतका कार्यकर्ताले दुव्र्यवहार गरेका थिए।
उक्त घटनाको विरोधमा इन्जिनियरहरु आन्दोलित छन्। उनीहरुले पक्राउ परेका राउतका १७ कार्यकर्तामाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुको काउन्टरमा जनमत पार्टी पनि आन्दोलनमा छ।
तेस्तै, नेकपा एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच भनाभन भएको खबर छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष भिम रावल विच केन्द्रिय कमिटी बैठकमै नोकझोक चलेको छ।
दश बुँदे कार्यान्वयन नभएको र आफुलाई एक्लो बनाएको भन्दै भिम रावल बम्किन थाले पछि एमाले अध्यक्ष ओलीले विचमै हस्तक्षेप गरेका थिए। सारै कम मात्रै रिसाउँने ओलीले आज भने रातो मुख लगाएर रावललाई झपारेको एक केन्दिय सदस्यले ओटीभी नेपाललाई जानकारी दिए।
अध्यक्ष ओलीले काम गर्न सक्दिन भनेर राजीनामा दिएपछि १० बुँदेको औचित्य सकिएको बताएका थिए। तपाईंले सक्नु भएन राजीनामा दिनु भयो त म के गरौँ रु,’ बैठकमा ओलीले भने,
अब राजीनामा दिएपछि कार्यदल पनि सकियो, १० बुँदेको उपदेयता पनि सकियो। किन कार्यदल चाहियो। तपाईंले राजीनामा दिएपछि कार्यदल नै सकियो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको समस्याका,
विषयमा पार्टीका कमिटीहरुमै छलफल हुने बताए। रावलले ओलीलाई साईजमा ल्याउन यो कदम चालेको बुझिएको छ। जवाफमा रावलले आफूले नसकेर राजीनामा दिएको नभई आफ्नो कुरा,
कार्यान्वयन नभएपछि राजीनामा दिएको बताएका थिए। रावल र ओलीका बीचमा भनाभन चर्किएपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य र अमृतकुमार बोहराले उनीहरुलाई रोकेका थिए।
केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले पनि स्थायी कमिटीको समस्या स्थायी कमिटीमै मिलाउनुपर्ने बताएपछि उनीहरुको विवाद रोकिएको थियो। ओलीले झपार्दा समेत अरु कसैको साथ नपाए पछि रावल चुप लागेका थिए।
बैठक अवधि भर मुड अफमा बसेका रावल बैठक सकिए पछि भने महाधिवेशनमा प्रयोग हुने डिजिटल भोटिङ मेसिनमा नमुना भोटिङका लागी पुगेका थिए।
एमाले एकतावद्ध भएको सन्देश गएका बेला रावलले नचाहिने लफडा गरेको भन्दै देशभरका एमाले कार्यकर्ताले पनि रावलको ओलोचना गरिरहेका छन्।